Badhasaabka Awdal oo Sh Xasan Daheeye ku eedeeyay argagixisnimo balse yaa u dhow - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Badhasaabka Awdal oo Sh Xasan Daheeye ku eedeeyay argagixisnimo balse yaa u dhow
Sh Xasan Daheeye ayaa jawaabtii uu siiyay badhasaabka diinta caayay laakiin ka toobad keenay ay ahayd ”idinkaa iiga dhow” oo sheekhu ula jeedo in beesha ISAAQ uga dhowdahay argagixisada daadisay dhiigeena ee wahaabiyada ah qabuuro faqa ah.
Waxaad is odhan kartaa wuxuu sheekhu niyada ku hayay cidii madaxda u ahayd argagixisada oo aad loo wada garanayo, waxa sheekhu isha ku hayay in argagixisadu caadi u timaad Hargeysa iyo Burco kana ugaadhsato dhalinyarada.
Ilaa hadda ma Jiro nin dhalinyaro Samaroona oo is qarxiyay asagoo u haysta in jano sidaa lagu galo, waxaanse wada ognahay in ay jiraan dhalinyar badan oo ISAAQA oo ka mid ahaa kuwii xasuuqay Somali badan.
Waxaan kale oo ognahay in xiriir fiican ka dhexeeyo maamulka beesha dhexe iyo argagixisada oo xataa argagixisada la raadiyaa caadi uga dhoofaan Hargeysa.
Hoos ka daawo jawaabta sheekha iyo eedaynta badhasaabka diinta caayay